Matrix သည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Matrix သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုပြသခဲ့သည်
matrix တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်ပြသနေပြီး၊ archကရာဇ်မီဒီယာကြော်ငြာအရောင်းပလက်ဖောင်း၏အောင်မြင်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်မိတ်ဖက်ပြုမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့၏သုံးစွဲသူအခြေပြု 25% ဖြင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သူတို့၏နည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်အစုစုသည်ဆက်လက်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီသည်သက်တမ်းတိုးမှုနှုန်းကို 96% ထက်ပိုပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ Matrix ၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းသည်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ပုံနှိပ်စက်များအထိကျယ်ပြန့်သည်။
Matrix သည်၎င်းတို့၏နည်းပညာများကိုမီဒီယာရောင်းသူများအားပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာရောင်းနိုင်ရန်အရည်အသွေးမြင့်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုဆောင်ကျဉ်းရန်၎င်းတို့၏နည်းပညာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ပြီးအဆင့်မြှင့်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရယူနိုင်ရန်နှင့်သူတို့၏နေ့စဉ်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် Monarch ပလက်ဖောင်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မှုများကိုအစီရင်ခံရန်အတွက်မွမ်းမံမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုတွင် Matrix ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့မှုကိုယခုနှစ်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည်မက္ကဆီကိုစီးတီးတွင်ထိုစျေးကွက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်အသင်းအသစ်တစ်ခုကိုအားပေးခဲ့သည်။ Matrix ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်မကြာသေးမီကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကြေငြာချက်နှင့်အတူရပ်တန့်ခြင်းလက္ခဏာမပြပါ matrix အရောင်း Gateway မှာမီဒီယာကြော်ငြာ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်း
Matrix သည်အနာဂတ်ရှေ့ဆက်နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Matrix အဖွဲ့သည်နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ရှေ့သို့အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည်ထင်မြင်ချက်များကိုဖြစ်စေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံသည်ပြောင်းလဲနေသောညီမျှခြင်းသည်ပရိသတ်များကိုလမ်းကြောင်းပေါင်းစုံမှထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး“ makegood” ဟူသောအသုံးအနှုန်းမတည်ရှိသော်လည်းကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်ရလဒ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်နှင့် AIML သည်အချိန်ကာလမှငွေသားအထိအချိန်ကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေသည့်နေရာ၊ အမှားအယွင်းများကိုလျှော့ချရန်နှင့်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အမှားများကိုလျှော့ချရန်နည်းပညာကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသည်” ဟု Matrix ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Gorman ကပြောကြားခဲ့သည်။ Matrix သည်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်ထိပ်ဆုံးနှင့်အောက်ခြေအဆင့်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်သည်မီဒီယာ၏အနာဂတ်ဖြစ်သည်။
Matrix သည်နှစ်စဉ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည် မီဒီယာကြော်ငြာအရောင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေး။ ယခု၎င်း၏4၌တည်၏th ဇန်န ၀ ါရီလတစ်နှစ် 22-24၊ 2020၊ ဒီမိုင်ယာမီကမ်းခြေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေး, FL, နည်းပညာ, အလိုအလျောက်နှင့်စားသုံးသူအပြုအမူစသည့်အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သောမြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအားအတူတကွစုရုံးစေခြင်း၊ မီဒီယာကြော်ငြာကိုယနေ့နှင့်အနာဂတ်တွင်ပါရောင်း ၀ ယ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာများနှင့်များစွာသောကွန်ယက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူ၎င်းသည်အဓိက၊ မလွဲမရှောင်သာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, မှာ Matrix သွားရောက်ကြည့်ရှု www.matrixformedia.com.
matrix မီဒီယာမီဒီယာကုမ္ပဏီပိုကောင်းသူတို့ရဲ့ content တွေကိုမှငွေရရှိအောင်ကူညီခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်စေသည်။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန်, ဧကရာဇ်, မီဒီယာများအတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာရောင်းအားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် - အလားအလာများအတွက်လိုအပ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကယ်တင်တတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ရောင်းအားသတင်းအချက်အလက်သို့ဖရိုဖရဲ data တွေကိုပြောင်းလဲစီမံခန့်ခွဲခြင်း, စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ 13 မီဒီယာရောင်းသူထက်ပိုရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံး-In-class ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အရောင်းထောက်လှမ်းရေး, မီဒီယာ-တိကျတဲ့ CRM နဲ့အရောင်း tools တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မီဒီယာကြော်ငြာဝင်ငွေထက်ပို $ 10,000 ဘီလီယံအထိစီမံခန့်ခွဲ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး matrixformedia.com.
CES2017 ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မာကု Gorman matrix matrix အရောင်း Gateway မှာ ဧကရာဇ် အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် virtual reality 2019-12-05
ယခင်: ကြည့်ရှုသူသန်းပေါင်းများစွာသို့အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန် ATEME သည် CJ မင်္ဂလာပါဗွီဒီယို Transcoding လုပ်ခြင်း
နောက်တစ်ခု: အနာဂတ်ဗီဒီယိုမှာ IPV သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်£ 4m ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအာမခံသည်